Hindise xil ka qaadis ah oo ay 92 Xildhibaan ka gudbiyeen Madaxweyne Farmaajo – Kalfadhi
Hindise xil ka qaadis ah oo ay 92 Xildhibaan ka gudbiyeen Madaxweyne Farmaajo
92 Xildhibaan ayaa Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ka gudbisay Mooshin xilka looga qaadayo, taas oo lagaarsiiyey Guddoomiyaha Golaha Shacabka. Waxay Madaxweynaha ku eedeeyeen inuusameeyey “Qiyaano Qaran” iyo xad-gudub ka dhan ah “Dastuurka iyo Shuruucda”kale ee qaranka. Eeddooda waxay kusoo koobeen 5 qodob, laakiin waxayfaahfaahsaneyd ilaa 8 bog.
Waxay cusbooniisiiyeen eeddii ku saleysneyd “Dhiibistii Cabdikariin Qalbi-Dhagax” oo ay tilmaameen inuu Madaxweynuhu u gacan geliyey Itoobiya, “isgoo baal maray” bey yiraahdeen “Dastuurka iyo Xeerka Ciqaabta Soomaaliya”. Waxay sheegeen in, kasakow muwaadinnimada Qalbi-Dhagax, aysan jirin wax hishiis ah oo u dhaxeeya Soomaaliya Itoobiya oo ku saleysan isweydaarashada dambiilayaasha ama eedeysanayaasha.
Waxay ku eedeeyeen Madaxweynaha inuu galay hishiisyo ka dhan ah madax-banaanida Soomaaliya, “isagoo ku farxay” bey yiraahdeen “inuu Reysal Wasaaraha Itoobiya hortiisa uga qudbeeyo iney Soomaaliya, Eretereeya iyo Itoobiya yeelanayaan hal Madaxweyne”. Waxay qiyaano qaran uga dhigeen inuu galay hishiisyo uusan Baarlamaanka hor keenin, dowladihii uu la soo galayna ay leeyihiin “Soomaaliya ayaan hishiis la galnay”, sida ay ku qoreen warqaddooda.
Dowladda Farmaajo waxay ku dhoobeen eed ah iney burburineyso Ciidanka Qaranka, “iyadoo sameysatay” bey yiraahdeen “maleeshiyaad ku kacay dilal iyo weerarid ka dhan ah shacab iyo siyaasiyiin, islamarkaana geystay dhac iyo cabsi-gelin”. Waxay yiraahdeen “Madaxweynuhu waxa uu isku dayey inuu maquuniyo cid kasta oo ka aragti duwan”. Si guud ayey ugu eedeeyeen inuu Madaxweynuhu ku tuntay dhamaan nidaamka ciidanka dalka.
Waxay sheegeen inuu doonayo inuu burburiyo Dowlad Goboleedyada, “isaga oo u daabulay” bey yiraahdeen “maleeshiyaad deegaannada Dowlad Goboleedyada”. Sidoo kale, waxay sheegeen iney Xukumaddiisu ku bixisay lacag in la kala dilo madaxda Dowlad Goboleedyada. Doorashooyinkooda ayey Xildhibaanadu sheegeen iney DFS faragelin xoog leh ku hayso.
13 Xildhibaan, oo ka mid ah Xubnaha 92-ka ah ee saxiixdayMooshinkaas ka dhanka ah Madaxweyne Farmaajo, waxay goordhaw shirjiraa’id, ooay ku faahfaahinayaan Mooshinka, ku soo gabagabeeyeen Xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho, waxaadna halkan hoose ka aqrisan kartaa Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweyne Farmaajo ee ay u gudbiyeen Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweyne FarmaajoDownload
Xeer Illaaliyaha Qaranka: Ma aaminsani iney Soomaaliya Lambar Kow ka tahay dalalka ugu musuqa badan aduunka
Kuxigeennada Guddoonka Golaha Shacabka oo diiday Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweyne Farmaajo